श्रीमतीको कपाल कोरिदिएको भिडियोलाई ‘अनै’तिक भिडियो’ भन्दै पुलिसले दुवैलाई प'क्राउ गर्यो ! - Hamro Abhiyan
श्रीमतीको कपाल कोरिदिएको भिडियोलाई ‘अनै’तिक भिडियो’ भन्दै पुलिसले दुवैलाई प’क्राउ गर्यो !
अहिले सामाजिक संजालमा सार्वजनिक भएको एक जोडीको भिडियोलाई अनै’तिक भिडियो भन्दै पुलिसले दुवैलाई प’क्राउ गरे । भिडियोमा श्रीमानले श्रीमतीको कपाल कोरिदिएका छन् । उनीहरुलाई प’क्राउ गरेर पुलिसले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
अनै’तिक भिडियोको आरो’पलाई दम्पतीलाई प’क्राउ गरेको यो घ’टना कुवेतको हो । डेलिमेलको रिपोर्ट अनुसार यी श्रीमान देशका अल्पसंख्यक समुदाय बिदुनका अुन् जसलाई देशको नागरिक समेत मानिँदैन । भिडियो सार्वजनिक भएपछि पुलिसले यी दम्पतीको घरमै गएर उनीहरुलाई पक्रा’उ गरेको हो ।
रिपोर्टका अनुसार भिडियोमा महिलाले केही अश्ली’ल कमेन्ट गरेको देखिएको दा’वी गरिएको छ । पुलिसले २१ जनवरीमा दम्पतीलाई गिर’फ्ता’र गरेको हो । पुलिसले उनीहरुवि’रुद्ध देशको क’डा शि’ष्टाचार का’नुनको उ’ल्लंघन गरेको आरो’पमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
कुवेतको एक अखबार अल कबासका अनुसार यो भिडियोमा केही युजरले आ’पत्तिज’नक कमेन्ट गरेका थिए । कुवेदमा विदुन समुदायका करिब १ लाख नागरिक बसोवास गर्छन् जसलाई सरकारले नागरिकता दिन चाहिरहेको छैन । कुवेत सरकार विदुन समूदायलाई अ’वैध निवासी मान्छ र उनीहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आ’धारभू’त सुविधा पनि दिइँदैन ।
गोकुल बाँस्कोटाको पक्षमा केपी ओली र ईश्वर पोखरेल, वि’पक्षमा ६ जना, पाैडेल माैन…
आफ्नै गोत्रको केटासँग बिहे गरेको भन्दै, पा’पी आफन्त भनौदाहरुले यसरी गरे ह’त्या…
यातायात विभागमा लाइसेन्स प्रिन्ट भएर चाङ ! लाइसेन्स परिक्षा पास गर्नेलाई लिन जान…
पशुपतिनाथमा राष्ट्रपति पुग्दा नागाबाबालाई गुप्ता’ङ्ग छोप्न निर्देशन
त्रिशूली नदीमा ट्रक ख’स्दा, चालक बिखे थोकरको मृ’त्यु, सहचालक घा’इते…